၂၄နာရီကြာထိန်းထားပေးရုံသာမက ရေစိုပါခံတဲ့ Super-Stay Liquid Eyeliner! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ၂၄နာရီကြာထိန်းထားပေးရုံသာမက ရေစိုပါခံတဲ့ Super-Stay Liquid Eyeliner!
၂၄နာရီကြာထိန်းထားပေးရုံသာမက ရေစိုပါခံတဲ့ Super-Stay Liquid Eyeliner!
ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ်ထသွားထလာအနေနဲ့ Eyeliner ပါးပါးလေးကို ပုံမှန်ဆိုးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချွေးထွက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ မျက်ဝန်းတဝိုက်ပျံ့ပျံ့သွားတတ်တာကြောင့် ပန်ဒါမျက်ဝန်းလေးမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပျိုမေတို့ကို တခါမှမကြုံဖူးသေးတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ အံ့ဩမှင်သက်တဲ့ခံစားချက်ကို အပြည့်အဝခံစားစေနိုင်မယ့် Eyeliner လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Eyeliner လေးကိုတကြိမ်အသုံးပြုပြီးတာနဲ့တင် ၂၄ နာရီကြာ တာရှည်ခံပြီး ရေစိုလည်းခံတာကြောင့် ချွေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိုးကြောင့်ဖြစ်စေ ပျံ့သွားခြင်းမရှိဘဲ တနေကုန်နက်မှောင်တဲ့မျက်ဝန်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ Eyeliner Tip လေးဟာဆိုရင် ultra-thin ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်နိုင်ပြီး ဆွဲသည့်အတိုင်းတိတိကျကျဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့် ပျိုမေတို့နှစ်ခြိုက်မှာအမှန်အကန်ပါပဲ။
အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ မျက်တောင်လေးတွေနဲ့နီးနိုင်သမျှနီးအောင် ကပ်ဆွဲပြီး Natural look မျိုးဖန်တီးနိုင်သလို ကိုယ်ဆွဲလိုသည့်အတိုင်း လွယ်ကူစွာပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တောင်ပံလေးထည့်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ ထောင့်စွန်းမှာအရင်တောင်ပံဆွဲပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းအရှေ့ကပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ပါ။ ပထမဆုံး Eyeliner စသုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးပါးပါးလေးစဆွဲဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်နော်။ ပါးပါးလေးဆွဲပြီးမှကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလို အမျိုးမျိုးအလွယ်တကူ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်တာကြောင့် ပထမဆုံးစအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ အရမ်းအဆင်ပြေမှာပါနော်။
Image Source: www.wunder2.com
ခြေဖျား လက်ဖျားတွေ အေးစက်ပြီး ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီလက်ဖက်ရည်တွေကို သောက်ပေးပါ